5 SaaS ဖောက်သည်များအောင်မြင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ Martech Zone
ဖောက်သည်များအောင်မြင်သောအဖွဲ့များသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်သုံးစွဲသူများကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်သောနေ့ရက်များပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်သည် ၀ ယ်ယူသူအောင်မြင်မှုအတွက် ပို၍ လျော့နည်းသွားပြီးပိုမိုရရှိရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှသည်အချို့သော smart မဟာဗျူဟာများနှင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် SaaS လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီ။
သို့သော်၎င်းမတိုင်မီကပင်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်မှန်ကန်သောအလေ့အကျင့်များကိုသိရှိလာသည်။ ဒါပေမယ့် ဦး ဆုံးအနေနဲ့ခင်ဗျားကဒီဝေါဟာရကိုသေချာသိတယ် ကြည့်ကြရအောင်။
Success Gap ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ဖောက်သည်၏ဆန္ဒသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကမ်းလှမ်းမှုနှင့်မကိုက်ညီလျှင်အောင်မြင်မှုကွာဟမှုရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီကွာဟချက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကမဖြည့်နိုင်တဲ့သေးငယ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်ခေါင်းထဲမှာရှိနေပါတယ်။ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများ၌သင်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသောကြောင့်ဤကွာဟမှုသည်အရေးကြီးသည်။
ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုဂိမ်းအစီအစဉ်၏ထိပ်သို့ရောက်ရန်သင် ၀ င်ရောက်ရန်သင်လေ့ကျင့်ထားသည့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ငါးခုကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကြည့်ပါ ဦး!
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် #၁။ Express ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်များကိုရယူပါ၊ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပါ
ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုရရှိရန်အလှပဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ကျေးဇူးတင်မှုကိုပြသခြင်းကိုဘယ်တော့မှရပ်တန့်ရန်မဟုတ်ပါ။ ထိုအဘို့, 'ကျေးဇူးတင်ပါတယ်' ရွတ်ထိုက်သောဂါထာဖြစ်ပါတယ်။
ဤလေ့ကျင့်မှု၏အဓိကအချက်မှာသင်၏ပြိုင်ဘက်များထဲမှသင်၏ဖောက်သည်သည်သင့်ကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားသူတို့အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်၌ဤအရာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ဦး ပထမအကြိမ်ဝင်ရောက်သောအခါ၊
ကျနော်တို့တုန့်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ကတည်းကဒါဟာနောက်ထပ်စစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးတဲ့ box တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအဆင့်တိုင်း၌တုံ့ပြန်မှုပေးရန်တိုက်တွန်းပါ။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်သင့်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုနားထောင်ခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုကိုသေချာစေရန်ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနေစဉ်၎င်းထက်အနည်းငယ်ပိုပါတယ်။ သင်တုန့်ပြန်ချက်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းတွင်အသုံးပြုပါက၎င်းတို့သည်ကျေနပ်အားရမှုကွာဟချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤအတွက်၊ တုံ့ပြန်ချက်သည်ကုန်ပစ္စည်းအဖွဲ့သို့ရောက်ရှိရန်သေချာစေပါ။ ပြီးတော့ဒါကို real-time မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ ဖောက်သည်များသည်ထုတ်ကုန်အဖွဲ့များ (သို့) သုတေသီများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အခါ၎င်းတို့ ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် #၂။ Activation ကာလကိုအများဆုံးလုပ်ပါ။ ရွှေ Period ဟုလည်းခေါ်သည်
ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက်များကဲ့သို့ပင်၊ ထုတ်ကုန်တိုင်းအတွက် activation ကာလသည်ရွှေအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသစ်သောအရာများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုကြိုးစားရန်ဖောက်သည်သည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်သည့် mode တွင်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအောင်မြင်စေရန်အစမှအစကြိုတင်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပါ။
ဖောက်သည်ကတဆင့်လိုက်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်ဟုခံစားရသော activation မှတ်တိုင်များစွာကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုဖောက်သည်အတွက်အလျင်အမြန်အနိုင်ရရှိပုံရသောအဖြစ်အပျက်များကိုပိုက်လိုင်းဖြင့်ပုံဖော်ပါ။ ထိပ်ဆုံးမှ, ဤဖြစ်ရပ်များကိုဖောက်သည်ကျေနပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့ကိုအဖြစ်အရေအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။
သို့သော်ဤအချိန်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နှေးကွေးသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်သူတို့၏သမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုမရရှိနိုင်သောဖောက်သည်များနှင့်အတူဆုံတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကိုလုပ်ကြည့်ပါ ဦး SaaS ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် SaaS ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သို့သော်ဤအဆင့်ကိုမလျှော့ချပါနှင့်
ရွှေရွှေစည်ကိုချကြစို့ ဤရွှေရောင်ကာလတွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဖောက်သည်များ၏ကျန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်၏အကောင်းဆုံးကိုပေးဖို့မမေ့ပါနှင့်!
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် (၃) - သုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်ပြီးပစ်မှတ်များကိုရောင်းချခြင်း
အဖြစ်မကြာမီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူပြီးပြီအဖြစ် SaaS ဖောက်သည် onboardingသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေအကြောင်းပညာပေးတာကနေစတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျောင်းမှာမင်းရဲ့သင်္ချာအတန်းတွေကိုပြန်မှတ်မိလား။ ဘယ်အချိန်မှာအက္ခရာသင်္ချာသို့မဟုတ် trigonometry သည်စစ်မှန်သောဘဝ၌သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်မည်နည်းဟုသင်စဉ်းစားမိပေမည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုသင်တူးသည့်အခါသင်၏ဖောက်သည်များနှင့်တူညီသည်။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ! အထက်ဖော်ပြပါအလေ့အကျင့်နှစ်ခုကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူလိုအပ်သည့်အရာများကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အချိန်ငွေလား။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်နှင့်သင်၏အမှုသည်၏အချိန်ကိုသူတို့မလိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်အဘယ်ကြောင့်မဖြုန်းတီးပါသနည်း။
သင့်ဖောက်သည်လိုအပ်သည့်အရာများအပေါ်အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးပါ။ ထို့အပြင်၊ သုံးစွဲသူ၏ပြproblemsနာများအတွက်သင်အမြဲတမ်းနားညောင်းရမည်။ ဦး စွာနားထောင်ပါ၊ ထို့နောက်မှန်ကန်သောမေးခွန်းများမေးပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ထုတ်ကုန်သည်သူတို့၏ပြwနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြပါ။ အလားတူစွာသင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုရှည်လျား။ ပျင်းစရာသီအိုရီထက်လက်တွေ့ကျသောလေ့ကျင့်မှုများကိုပို့ချရန်ကိုလည်းအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် # ၄: B4B ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းရန်အတွက် H2H အဖြစ်စဉ်းစားပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်မဟာဗျူဟာများချမှတ်ရာတွင်အချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာကုန်ဆုံးကြသည်။ ထိုအခါမူကားသူတို့သည်အခြား client များပေါ်တွင်၎င်းတို့အား copy-paste လုပ်ခြင်း၏အမှားကိုပြုလုပ်သည်။ လူနာ (၂) ဦး ကဲ့သို့မတူညီသောကုသမှုများလိုအပ်သကဲ့သို့တူညီသောရောဂါအတွက်ပင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ပြproblemsနာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
B2B ကို H2H အဖြစ်ကုသရမည်ဟုသင်နားလည်ရမည်။ သင်ကသင့်တော်သည်ဟုယူမှတ်သည်နှင့်အမျှလူမှလူသို့၎င်း၊
သင်၏အဖွဲ့များကိုဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းများကိုမျှဝေပြီးဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာမလုပ်သည်ကိုသူတို့အားကူညီပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်၎င်းတို့အားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးနိုင်ရန်၎င်းတို့အား ad hoc ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်သင်တဖြည်းဖြည်းသင်ရမည်။ ၎င်းသည်တည်ဆောက်ရန်ကူညီသည် SaaS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ ပိုကောင်းထိရောက်
များများကြည့်ရှုကြည့်ပါ လူသားမြားသအဖြစ် client ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါကသူတို့၏ထိန်းသိမ်းထားမှုကိုပိုမိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤပေါ်လစီကိုကျင့်သုံးသောဖောက်သည်အောင်မြင်သူမန်နေဂျာများသည်ဖောက်သည်များအားထိန်းသိမ်းခြင်းကိုပိုမိုချောမွေ့စေသည်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် ၅။ SaaS ဖောက်သည်များအမြန်အောင်နိုင်ခြင်းအတွက်အောင်မြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပါ
ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုမန်နေဂျာသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုခြေရာခံရန်တာ ၀ န်များစွာရှိသည်။ သူတို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးကိုလေ့လာစူးစမ်းလေ့လာကြပေမယ့်အလုပ်တွေဟာအချိန်တော်တော်များများမှာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဤသည်တဖြည်းဖြည်းသင်၏ဖောက်သည်အောင်မြင်မှုအချိုးကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်အသုံးပြုပါ အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် software ကို ဖောက်သည်အောင်မြင်မှုtheရိယာ၌အမြန်အနိုင်ရရှိဘို့သင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်များကိုအလိုအလျောက်သည်။ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအရာများကိုအာရုံစိုက်ရန်နေရာပေးပါလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အား backlog ကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင်၏ resolution time ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အဝေးရောက်စီးဆင်းမှုနှင့်အတူသင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံးကိုအချိန်မီဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုအလားအလာအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆန်းစစ်ရန်နှင့်တိုးတက်ရန်အချိန်ရလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် SaaS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုကိုသင်၏စီးပွားရေးရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကိုအကျိုးရှိစေသည်။ ၄ င်းသည်သင့်ဖောက်သည်များအားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ယူဆောင်လာနိုင်သောထိရောက်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ထိုးဖောက်နိုင်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားဖောက်သည်စွဲမြဲမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမှချိုမြိန်သောနှုတ်ခမ်းများပြန့်နှံ့စေရန်သင့်အားကူညီပါလိမ့်မည်။
Tags: activationb2bဖောက်သည် onboardingဖောက်သည်အောင်မြင်မှုကျောက်တုံးအချစ်၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် software ကိုအသုံးပြုသည်အောင်မြင်မှုကွာဟမှု